GNOME 40.7, "inofinha" kugadzirisa kugadzirisa tsikidzi | Linux Addicts
takasuwa yechitanhatu poindi yekuvandudza (pano wechishanu), asi anotevera atosvika. Iyo purojekiti kuseri kweiyo inonyanya kushandiswa desktop munyika yeLinux akakanda GNOME 40.7, inova yechinomwe yekugadzirisa vhezheni yeGNOME yakaburitswa munaKurume wegore rapfuura. Parizvino inowanikwa mukugovewa seUbuntu 21.10, haisi kuburitswa kutsva ine maficha matsva, asi inosanganisira zvigadziriso kuita kuti zvese zvifambe zvakanaka uye zvakavimbika.
Mumashoko evagadziri vayo, «GNOME 40.7 yakagadzirirwa kuve inofinha bugfix update […], saka inofanirwa kuve yakachengeteka kukwidziridza kubva kune ekare mavhezheni eGNOME 40.«. Pakati pe inogadzirisa, tinogona kutaura mamwe akadai seanotevera.
Zvimwe zvezvigadziriso zvakaitwa muGNOME 40.7
Yakavandudzwa hwindo yekutevera muGNOME Shell.
Kuderedza uye kuderedza mifananidzo yakagadziridzwa.
Yakareruka inotsvedza fade shading kushanda pane yekare Hardware.
Kugadzira mepu pamapiritsi eWacom
Tsigiro yeABGR uye XBGR mafomati muiyo DMA-BUF subsystem.
GNOME Shell yakagadziridzwa kuitira kuti chidzitiro chirege kumuka muUsavhiringidza maitiro.
Mutter kuvandudzwa kweasina kutungamirwa Xwayland windows asina kuvandudzwa.
Mawedzero akati wandei akagadziridzwa.
Mamwe maapplication akagadziridzwa kune "nyowani" vhezheni, mune makotesheni, nekuti GNOME 41 yatovepo.
Zvingave sei neimwe nzira, yakashandiswa kugadzirisa marudzi ese ebhugi, kuvharika kusingatarisirwe (kuparara), kudonha kwendangariro, kutsigirwa kwakagadziridzwa kwezvikamu zvisina systemd uye shanduro.
GNOME 40.7, kana kuti kunyanya kwaro kodhi, inowanikwa en Iyi link. Mapurogiramu akaverengerwa 40.7 seyazvino vhezheni ichaonekwa paFlathub munguva pfupi. Kubva pano, taura izvozvo, kunze kwekunge zvichinyanya kudikanwa, zviri nani kumirira yedu Linux kugovera kuwedzera mapakeji matsva kune ayo epamutemo repositori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 40.7, "inofinha" kugadzirisa kugadzirisa tsikidzi
Linux Mint 20.3 ine itsva Edge ISO yevashandisi vane nyowani hardware
Linux 5.15 yakazomakwa se "refu" (LTS) vhezheni